Ogaden News Agency (ONA) – Duleedka Magaalada Tepi ee Koonfurta Itoobiya oo 30 Askari Wayaanaha Lagaga Dilay.
Duleedka Magaalada Tepi ee Koonfurta Itoobiya oo 30 Askari Wayaanaha Lagaga Dilay.
Posted by ONA Admin	/ June 12, 2015
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Tepi oo kutaala koonfurta Itoobiya ayaa sheegay in halkaasi uu dagaal culus kudhexmaray koox hubaysan iyo ciidanka Itoobiya. Dagaalkan ayaa lagaga dilay ciidanka Itoobiya 30 askari kuwaasoo uu kamid yahay taliyihii ciidankan watay meesha tirade dhabta ah ee dagaalkan kudhaawacantay aan lasheegi Karin. Waxaa istibaalka magaalada Tepi ee layidhaahdo Emanuell Hospital lakeenay qaar kamid ah dhaawicii kasoo gaadhay ciidanka Itoobiya dagaalkan udhexeeya iyaga iyo dablaysan husayn.
Sidaad todobaadkii hore kala socoteen wararkaanagii hore waxaa weerar kusoo qaaday magaalada Tepi koox hubaysan oo halkaas kala baxday xabsiga magaalada boqolaal maxbuusiin ah qaar kamid ah askarta wayaanaha kulaayay. Waxay wararku sheegayaan ineey ciidan tiro badan oo Itoobiyaan ah weerar kuqaadeen fadhiisimaha kooxda ay kasamaysteen agagaarka magaalada Tepi.
Waxay wararku intaas kudaarayaan in labo kamid ah dablaydii hubaysnayd ladilay. Labadan xubin ee dablayda laga dilay ayaa waxaa kamid ah nin layidhaah Ganati oo isagu kamid ahaa aasaase yaashii jabhadan. Kadib ciidamada gumaysiga Itoobiya oo dhaqan xumida caan ku ah ayaa maydkii Ganati intii gaadhi lagu soo xidhay magaalada Tepi lagu soo wareejiyay. Gabadh kamid ah shacabkii magaalada Tepi oo magaceeda lagu sheegay Roose ayaa tidhi * Ganati wuxuu ahaa geesi wadani ah* intaas kabacdi roose waxaa kaxaystay ciidanka gumaysiga Itoobiya meel lageeyayna lama garan karo.
Dhanka kale waxay wararku sheegayaan in Gudoomiyihii Degmada oo layidhaahd Shalome iyo Gudoomiya Zoonka oonan magaciisa helin jeelka lootaxaabay. Shacabkii magaalada Tepi ayaa aad ooga cadhooday sida foosha xun eey ciidanka gumaysiga Itoobiya oogu jiid jiideen maysta Ganati. Inkastoo shacabku uusan waxba qaban Karin hadana waxay muujiyeen sideey ooga cadhaysan yihiin dhaqan xumida ciidanka Wayaanaha.
Habdhaqanka noocan oo kale ah ayaan kucusbayn shacabka Somalida Ogadenya. Waxaa magaalooyinka Ogadenya maalin kasta lasoo safaa maydadka bulshada rayadka ah iyadoon xataa mararka qaar loo ogolayn in maydadka ay soo gumaadeen wayaanuhu la’aaso. Ma’aha wax kucusb Somalida Ogadenya in markii wayaanaha lasoo jabiyo ay shacabka ku gadoodaan isla markaana ay jeelasha utaxaabeen qofkay umaleeyaan inuusan taageersanayn dhibaatooyinka ay shacabka kuhayaan ciidanka Gumaysiga Itoobiya.